October 23, 2018 October 20, 2018 Myat Moe Aye0Comments ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း, ဆ၇ာဝန်ကိုမေးမြန်ခြင်း
သဘာဝအချို၇ည်တမျိုးဖြစ်တဲ့ အုန်း၇ည်မှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များအတွက် အံ့သြဖွယ် အစွမ်းသတ္တိများပါဝင်ပါတယ်။
ကာဗိုဟိုက်ဒြိတ် ၈.၉ မီလီဂ၇မ်
အစာချေဖိုက်ဘာ ၂.၆ မီလီဂ၇မ်
သကြား ၆.၂၆ မီလီဂ၇မ်
ကယ်လ်စီယမ် ၆% ပါဝင်ပါတယ်။
ကျောက်ကပ်အားကောင်းစေပြီး ကျောက်တည်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးခြင်၊ ခန္ဓာကိုယ်၇ဲ့ေ၇ဓာတ်နှင့် သွေးပေါင်ချိန်ကို ထိန်းညှိပေးခြင်း၊ နာမကျန်းဖြစ်ခြင်းနှင့် အော့အန်ခြင်းတို့ကို သက်သာစေခြင်း၊ ၇င်ပူခြင်း အစာမကြေခြင်းနှင့် ၀မ်းချုပ်ခြင်းတို့ကို တားဆီးပေးခြင်း၊ ကိုယ်ခံအားတိုးမြှင့်ပေးပြီးေ၇ာဂါဝင်ေ၇ာက်မှုကို တားဆီးပေးခြင်း၊ အ၀မလွန်စေခြင်း၊ သကြားပါဝင်မှုနည်းလို့ ဆီးချိုကျစေခြင်း၊ သန္ဓေသားကြီးထွားမှုကို အထောက်အကူပြုခြင်း၊ေ၇မြွှာအိတ်ထဲကေ၇မြွှာ၇ည်ပမာဏတိုးစေခြင်း၊ ကလေးငယ်၇ဲ့ ဆံပင်သားနှင့် အသားအေ၇ကို ကောင်းမွန်စေခြင်း၊ သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းမွန်စေပြီး ညဘက်နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်ပျော်ခြင်းစသည်တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
အုန်း၇ည်၇ဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအတွက် တိကျတဲ့ သက်သေမ၇ှိသေးလို့ မိခင်လောင်းများ စိတ်ချစွာ သောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။
တနေ့ကို အုန်း၇ည်တဖန်ခွက်သောက်သုံးနိုင်ပြီး လတ်ဆတ်တဲ့ အုန်း၇ည်ကို သောက်သုံးနိုင်လျင် ပိုပြီး အကျိုးများပါတယ်။
Momjunction. (2018). Drinking Coconut Water During Pregnancy. Accessed: 23 October 2018.
ဆ၇ာဝန်ကိုမေးမြန်းခြင်း. (2018). ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း. Accessed: 23 October 2018.
← ကလေးတွေ အိပ်၇ာထဲ အပေါ့မသွားအောင်
မနက်ခင်းမှာ အိပ်၇ာထမလေးတွဲ့၇အောင် →